Rastra Daily | ‘जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि विवादले नेकपालाई ठुलो क्षति भयो’
‘जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि विवादले नेकपालाई ठुलो क्षति भयो’
विरोध खतिवडासत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घीय संसदका सदस्य हुन् । हक्की स्वभावका खतिवडा २०४८, २०५१, २०५६, २०६३ र २०७४ मा गरी ५ पटक सांसद भइसकेका छन् । खतिवडा विगत केही महिनायता पार्टीमा बढेको विवादले ठूलो क्षति पुगेको भन्दै त्यसको परिपूर्ति गर्न अब अभियान नै चलाएर देशव्यापी कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको ठान्छन् । नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही, जनताका अपेक्षा र पार्टीभित्र देखिएको विवाद लगायतका विषयमा रातोपाटीले खतिवडासँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ, खतिवडासँग विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्ला केही महिना आन्तरिक विवादमै अल्झियो । यसले पार्टी र सरकारलाई कति असर गर्‍यो ?
पार्टीमा विवाद हुन्छ, विभिन्न विषयमा मत मतान्तर हुन्छ । त्यसमाथि भर्खर एकता भएको पार्टीमा यो सामान्य हो भनेर बाहिर खपतका लागि भन्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् । तर साँच्चिकै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विवाद बाहिरै छरपस्ट आयो । पार्टी नै फुट्ने तहसम्म पुगेको थियो भन्ने विभिन्न अभिव्यक्ति र क्रियाकलापका घट्नाक्रमहरू पनि भए । स्वभावैले एकता गरेर सङ्गठनहरू राम्रोसँग चलेर जनताका बीचमा जान पाउँदा त्यसमा हुने ऊर्जा, फूर्ति र कार्यकर्तादेखि नेतासम्ममा हुने जाँगरमा यो विवादले स्खलन ल्यायो । त्यसको परिणाम तल तलका मतदातासम्म पनि एक किसिमको निराशा, खिन्नता र एउटै पार्टीभित्र पनि को कता लागेको छ भन्ने शङ्का उब्जायो । यस्ता कुरा जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि यसले नेकपा पार्टीलाई ठूलो क्षति गर्यो । तर सम्पूर्ण क्षति हुनुभन्दा अघि नै पार्टी व्यवस्थापन गर्ने र विवाद टुङ्ग्याउने भनेर पहलकदमी भएका छन्, त्यो सकारात्मक छ । अब एकताबद्ध ढङ्गले हामी राम्रो ढङ्गले खट्यौँ र पार्टीभित्र यस्ता विवाद हुन्छन् भनेर कार्यकर्ता मतदाताहरूलाई सम्झाउन सक्यौँ भने पनि यसलाई पुर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।
त्यसकारण यो विवादले केही न केही जनमत या सक्रिय मान्छे अलिकति निष्कृय हुने, थप निष्कृय हुने र कतिपयलाई वितृष्णा नै भइदिने हुँदा यसको फाइदा अरू पार्टीहरूले लिने खतरा छ । त्यसका बाबजुद अहिले फेरि पार्टी ठीक ठाउँमा आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
कार्यदल गठन र त्यसले दिएको प्रतिवेदनपछि पार्टीमा सुधार आउँछ भन्ने तपाईंको सङ्केत रह्यो । तर नेता कार्यकर्तामा विवादले पैदा भएको निराशा चिर्न नेकपाले ठोस रूपमा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा नेतृत्व तहमै प्रतिवेदन, संविधान, विधान र सम्झौतमा लेखिएका कुराहरू अक्षर हुन् । ती अक्षर व्यवहारमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ । अर्को कुरा प्रतिवेदनमा हामी मिल्यौँ भनेर हस्ताक्षर गरे पनि मनभित्रका तुषले एकअर्काप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै त्यस्ता तुषहरू पूर्ण रूपमा सफा गर्नुपर्छ । त्यो सन्देश कार्यकर्ता र मतदातसम्म पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन्छ । पार्टी एकता भएपछि देशव्यापी रूपमा कुनै पनि अभियान चलाइएको छैन । अघिल्लै वर्षको पुसबाट अभियान चलाउने भनिए पनि त्यो काम हुन सकेन । त्यसकारण अब यो कारणले विवाद भएको हो भन्ने कुरा देखिने गरी प्रभावकारी अभियान चलाएर कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा भर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको नेतृत्व जब पूर्ण ऊर्जासहित खट्छ त्यसपछि गाउँ र वडा तह पनि त्यसैअनुसार परिचालन हुन्छ । साथै प्रशिक्षण लगायतका गतिविधि गरेर निराश कार्यकर्तालाई ऊर्जा भर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
पार्टी नै फुट्ने तहसम्म पुगेको थियो भन्ने विभिन्न अभिव्यक्ति र क्रियाकलापका घट्नाक्रमहरू पनि भए । स्वभावैले एकता गरेर सङ्गठनहरू राम्रोसँग चलेर जनताका बीचमा जान पाउँदा त्यसमा हुने ऊर्जा, फूर्ति र कार्यकर्तादेखि नेतासम्ममा हुने जाँगरमा यो विवादले स्खलन ल्यायो । त्यसको परिणाम तल तलका मतदातासम्म पनि एक किसिमको निराशा, खिन्नता र एउटै पार्टीभित्र पनि को कता लागेको छ भन्ने शङ्का उब्जायो । यस्ता कुरा जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि यसले नेकपा पार्टीलाई ठूलो क्षति गर्यो । तर सम्पूर्ण क्षति हुनुभन्दा अघि नै पार्टी व्यवस्थापन गर्ने र विवाद टुङ्ग्याउने भनेर पहलकदमी भएका छन्, त्यो सकारात्मक छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि वर्तमान सरकार ढाल्नका लागि विदेशी राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग भयो भन्नुभयो । उहाँले भनेझै यो सरकार ढाल्न के विदेशी शक्ति लागेकै हो तपाईंलाई के लाग्छ ?
सरकार ढाल्न विदेशी शक्ति लागे भनेर प्रधानमन्त्रीले इमर्जेन्सीमा प्रयोग गरेको शब्द जस्तो लाग्छ । पार्टीमा बहुमत आयो । बहुमत आएपछि संसदीय दल ठूलो बन्यो । पार्टी ठूलो भएकाले हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि पार्टीमा झगडा भयो । कोहीले राजीनामा पनि माग्नुभयो होला । त्यसतर्फ अहिले म जान चाहान्न । तर मेरो छोटो जबाफ बन्दा पार्टीले बनाएको हुने, हामी आफैले बनाएको र स्वनिर्णयले बनाएको हुने अनि हट्दा विदेशीले भनेर भन्ने दोहोरो मापदण्ड हुँदैन । कि बनाउने बेलामा पनि विदेशीले बनाएको थियो भनेर भन्नुपर्यो अनि स्वतः हटाउन पनि लाग्यो भन्न सकियो नत्र त्यस्तो कुरा गर्नु ठीक होइन ।
भनेपछि नेतृत्वबाट बेलाकुबेला आउने यस्ता अभिव्यक्ति आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्न आउँछन् भनेर बझ्दा हुन्छ ?
कहिलेकाहीँ पार्टीमा झगडा वा विवाद हुँदा उत्तेजना आउँछ । अपशब्दहरू पनि आउँछन् । भोलि फेरि भेटघाट गरेर सँगै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छन् । त्यतिसम्म झगडा गरौँ, विवाद गरौँ ताकि भोलि फेरि एकै ठाउँमा बैठक बस्ने र एउटै अभियानमा हिँड्न सक्ने ठाउँ बाँकी राखेर मात्रै एकअर्कालाई घोच्नेपेच्ने, ठेल्ने र आरोप लगाउने काम गर्नुपर्छ । अब के गर्ने त ? हिजो लगाएका आरोपहरू ? यसले उसले म भन्दिनँ तर जजसले लगाए पनि अब के भन्ने त ? एकता भएपछि त्यही सरकारले राम्रो काम गरेको हुने ? हिजोसम्म नराम्रो काम गरेको हुने, टुङ्गो नलागुन्जेल भारतीय दलाल हुने टुङ्गिनेवित्तिकै राष्ट्रभक्त हुने ? रातारात यस्तो हुन्छ हुँदैन । त्यसकारण ती उत्तेजनाका अभिव्यक्तिहरू हुन् त्यसलाई नियन्त्रण र सुधार गर्दै लानेबाहेक उपाय केही छैन ।
तपाईं सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीका आधारमा तपाईंलाई आगामी चुनावमा जनताले कस्तो मूल्याङ्कन गर्लान् भन्ने ठान्नुभएको छ ? सङ्घीय र प्रदेश सरकारका कामबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
समस्या यसमा छ । जनताले फेरि हामीलाई किन मत दिने भन्ने कुरामा त हाम्रा घोषणापत्र छन् । घोषणापत्रमा भनिएका कति काम पूरा भए कति भएनन् ? भएनन् भने किन भनेर ढाँटछल नगरी इमान्दारपूर्वक जनतालाई भन्नुपर्छ । १५ वर्षपछि गर्ने काम पनि चुनावका बेला हामीले अहिल्यै गर्छौं भन्ने जुन हिसाबले बोल्यौँ । त्योबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । मतदातामाझ सकारात्मक कुरा लगे सकारात्मक नै हुन्छ नकारात्मक लगे त्यही फैलन्छ । हाम्रो आन्तरिक जीवन स्वच्छ र सफा भयो भने जनतामा पनि सकारात्मक कुरा नै प्रवाह हुन्छ । त्यसका नीति निमय, सरकारका काम सबै पर्छन् । कारणबस असमझदारी बढ्यो भने पार्टी वा सरकारका नकारात्मक कुरा खोज्ने र राम्रा पक्षलाई छोपिदिने अवस्था आउँछ । त्यसकारण पार्टी र सरकारबीच समन्य हुनुपर्छ भनिएको हो । दलीय व्यवस्थामा पार्टी प्रधान हुन्छ र विधि विधानअनुसार चल्नुपर्छ भनिएको हो । हरेक मुख्य विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्यो । नेताहरूबीच एकअर्कामा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्यो । भर्खर पार्टी एकता भएको छ, त्यसको स्पिरिटलाई सबैले मनन र एकअर्काको भावनाको कदर गर्नुपर्यो । यो ढङ्गले हामी तलसम्म पुग्न सक्यौँ भने मात्रै हामी र हाम्रो पार्टी पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ र जनताले पनि विश्वास गर्छन् । सरकारका कामबाट सन्तुष्ट हुने नहुने भन्ने प्रश्न अनन्त हो । अमेरिका र जापानमा पनि विकास टुङ्गिएको छैन । चीन र भारत पनि विकास नै भनिरहेका छन् । हाम्रा आवाश्यकता र आकाङ्क्षलाई मात्रै हेर्यौँ भने पूर्ति हुने कुरै भएन तर हामीसँग भएका स्रोत, साधन, सामग्री र बजेटलाई सदुपयोग गर्दै त्यो जनताको बीचमा कति पुर्यायौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हाम्रो स्रोत साधनको हिसाबले हेर्दा जे काम भइरहेका छन् । तर समन्वयको कमीले ती चिजहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् । त्यसमा केही विवादास्पद कुरा पनि भएका छन् । ती मिडियामा पनि आइसेका छन् । विवादकै कारण केही विधेयक र अध्यादेशहरू फिर्ता पनि भएका छन् । यो किन भयो भन्दा पार्टीमा हुने सरसल्लाहको कमीले नै हो । त्यसैले अब हामी फेरि ठीक ट्«याकमा आउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सम्भवतः आउँदा दिनमा यस्ता समस्या नरहलान् ।
घोषणापत्रमा भनिएका कति काम पूरा भए कति भएनन् ? भएनन् भने किन भनेर ढाँटछल नगरी इमान्दारपूर्वक जनतालाई भन्नुपर्छ । १५ वर्षपछि गर्ने काम पनि चुनावका बेला हामीले अहिल्यै गर्छौं भन्ने जुन हिसाबले बोल्यौँ । त्योबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । मतदातामाझ सकारात्मक कुरा लगे सकारात्मक नै हुन्छ नकारात्मक लगे त्यही फैलन्छ ।
अहिलेको सरकार मिलिजुली सरकार पनि होइन । मिलिजुली सरकार रहँदा जेजे गर्न नसकेपछि त्यसको थाप्लोमा हाल्न सकिन्छ किनभने अल्पमतमा थियौँ, गर्न सकेनौँ भन्न मिल्छ तर अहिले त्यसो भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले २०५१ सालमै अल्पमतको सरकार चलाएको हो । तर सामान्य चिया चौतारी, मेलापात लगायतमा पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने टिप्पणी सुनियो भने हामी ठीक ठाउँमा छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ । हैन त्यस्ता ठाउँमा पनि आलोचना, टिप्पणी र असन्तुष्टि बढी छ भने हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो सरकारले गरेका काम जनतामाझ लान सकेका छैनौँ कि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ भनेर बुझ्नुपर्छ । जनताले कति आशा गरेका थिए वा हामीले कति आशा जगाएका थियौँ ? के कारणले हो भन्न सक्दिनँ तर जनता खुशी छैनन् ।
विभिन्न काण्डमा सङ्घीय सरकार जोडिएको छ, खासगरी सुन काण्ड, वाइड बडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्ड । सरकारको आलोचनाकै लागि यी काण्डहरू जबर्जस्त उचालिएका हुन् या यी काण्डका बारेमा प्रभावकारी छानबिन र कारबाही गर्न सकेको भए यसले सरकार र पार्टीलाई फाइदा पनि हुन्थ्यो ?
हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने नेपाली उखानै छ । आगो नलागी धुवाँ देखिँदैन । हजारौँ काम भएका छन् तर सबै काम त विवादमा आएका छैनन् । हजारवटा पुल बन्दा दुईवटा पुलमा विवाद आउला, हजारवटा सडक बन्दा दुईवटाको पिच भत्कियो भनेर फोटा छापिएलान्, सयौँ कानुन बन्दा एक दुईमा विवाद आउँछ । यसको मतलब धेरै त राम्रा नै काम भएका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । जहाँसम्म तपाईंले केही काण्डहरूको कुरा गर्नुभयो ती कैयौँ काण्ड यो सरकार बन्नुभन्दा पहिलाका र अहिले बाहिर निस्केका पनि छन् । उदाहरणकै लागि सुन र वाइडबडी काण्ड । ती अघिल्लै सरकारहरूका पालाका हुन् । तर ओम्नी, यती भने पछि निस्केका हुन् । ती पनि अख्तियारल गायतका संवैधानिक अङ्गहरूले छानबिन गरिरहेका छन् ।
तर पछिल्लो पटक आएका काण्डहरूबारे पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायले चाँडो छिनोफानो त गर्न सकेन । यसले सरकार आफै यस्ता काण्डहरूको संरक्षक बनेको त होइन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ त रह्यो नि ?
म संसदीय समितिमा पनि भएकाले केही ती काण्डहरूको अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । हाम्रो समितिमा यती प्रकरणको कुरा त आएको छैन । ओम्नी समूहको आएको छ । त्यसमा निर्णय प्रक्रियामा सुरुबाटै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सामेल गराइएको छ । कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई अगुवा बनाएर निर्णय गर्ने र कानुनले चिनेका व्यक्ति उसको मातहतमा अतिथि भएर बस्ने र नचिनेको व्यक्ति संयोजक भएर निर्णय गर्ने यस्ता ढङ्गबाट काम भएकाले विवाद बाहिर आएको कागजपत्रहरूबाट देखिन्छ । साथै जसले कामको जिम्मा लिएको थियो, उसले जिम्माअनुसार काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यी कुराहरूले गर्दा केही प्रश्नहरू उठ्न पुगेका छन् । त्यसकारण उठेका प्रश्नहरूका बारेमा दुई तीन महिनामै टुङ्ग्याइदिएको भए दुईवटा फाइदा हुन्थ्यो । किनभने दोषी देखिए ऊ कारबाहीमा पर्छ र पोजेटिभ म्यासेज जान्छ । निर्दोष नै रहेछ भने पनि उसले लामो समय अनावश्यक तनाव खेप्नुपर्दैन । तपाईंले भनेजस्तो कैयौँ कुरा तत्कालै एक्सन लिन सकिने पनि भएका छैनन् । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको हकमा राजीनामा गर्न लगाइएको जस्तै पनि गर्न सकिन्थ्यो । यत्रो ठूलो पार्टीमा काम गर्ने क्रममा गल्ती हुनसक्छ तर गल्ती भयो भनेर थाहा पाएपछि स्वीकार गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ । त्यसरी स्वीकार गर्दा जनताले पनि क्षमा दिन्छन् । तर जबरजस्ती देखिँदादखिँदै पेल्न, ठेल्न र जबरजस्ती गर्न खोजियो भने विस्फोट भएर आउँछ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणकै सवालमा सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको भनेर जनगुनासो सुनिन्छ । तपाईं एउटा सत्तारुढ दलको सांसद के सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको पहल चित्तबुझ्दो छ ?
जति गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । मैले पनि यस्तो गुनासो नसुनेको होइन । सरकारको प्रयास यसमा पर्याप्त छैन । किनभने युरोप, अमेरिका र इटलीले त प्रयाप्त गर्न सकेका छैनन् । हामीले पर्याप्त भन्यौँ भने त्यो झुट हुन्छ । तर चीनको उहानमा सङ्क्रमण देखिएको भन्दा २ महिनापछि हामीकहाँ देखियो । त्यो दुई महिनाको तयारी अवधि हामीले दुरुपयोग गर्यौँ । त्यसपछि बल्लबल्ल गरिएका तयारीहरू पनि कम आकलन गरेर गर्यौँ । अहिले हामी जुन स्केलमा पुगेका छौँ त्यसलाई कम आँक्दा अझै काहा पुगिन्छ भन्ने अनुमान लाउन सकेका छैनौँ । त्यसमा त्रुटि भएको छ । अर्को कुरा जेजति खर्च गर्यौँ त्यो पारदर्शी ढङ्गले गरेनौँ जसले गर्दा विवाद आयो । अर्को कुरा अहिले भ्याईनभ्याई भ्यान्टिलेटर, आईसीयू, अस्पताल सुधार, निजी अस्पताललाई प्रयोग पहिला पनि हुनसक्थे । त्यसमा ध्यान दिइएन । कुनै पनि विषयको व्यवस्थापन एक महिनाअघि गर्नु र पछि गर्नुमा त्यसको प्रभावकारितामा फरक पर्न जान्छ । किनभने व्यापक आलोचना भइसकेपछि गर्यो भने पनि धन्यवाद पाउन मुस्किल पर्छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न १२ अर्ब खर्च गरिसकेको बताइरहेको छ । तर यति धेरै रकम खर्चिंदा मुलुकमा एउटा पनि भेन्टिलेटर थपिएको छैन, भनेपछि त स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ नि होइन ?
अहिले प्रविधि धेरै अघि छ । यदि देशभरको डाटा ल्याउ भनेर भन्यो भने एक घण्टामा दिन सक्छ । अथवा प्रतयेक दिन जहाँ जेजे खर्च गर्छ त्यो नेटमार्फत अपडेट गरेर एक सातामा केन्द्रले सार्वजनिक गर्नसकेको भए पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने थिएन । हो, यसमा सक्ने काम पनि नगरेको देखियो । जसले प्रश्न गर्न सजिलो बनाइदियो । १२ अर्ब एकैचोटि भन्दा धेरै हुन्छ । तर त्यसबाट व्यक्तिमा पुग्दा त एक लाख पुग्ला अनि उसले प्रश्न गर्छ, अरू खोइत ? अझै समय गइसकेको छैन । अहिले त १२ अर्ब मात्रै खर्च भएकोे छ, यस्तै रहे अर्को तीन महिनामा अरू २४ अर्ब खर्च होला ।
पार्टी विधि विधानअनुसार चल्यो भने स्थायी पनि हुन्छ र सुहाउँदो पनि हुन्छ, हैन फेरि तपाईंले भनेजस्तै टार्ने, झार्ने, टाल्नेतिर मात्रै गइयो भने तीन वा ६ महिनामा फेरि ढल्छ । त्यसकारण हामी आफूले जेजे बनाएका छौँ त्यो आफूले बनाएको अनुशासनको सीमाभित्र बस्नुपर्छ भनिएको हो । आफूले बनाएको संविधान र विधानलाई मान्नु पर्यो । त्यसो गर्दा मात्रै हामी ठीक ठाउँमा हिँड्छाैँ ।
फेरि पार्टीकै कुरा । अहिले पार्टी विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सहमतितिरै अघि बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सधैँ सहमतिबाटै अघि बढ्ने हो भने विधि, विधान र पद्धतिको कुरा किन गर्ने ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । हामी ढुङ्गालाई ठाकठुक पारेर देउता बनाउँछौँ । मन्दिर बनाएर अबिर लगाइदिन्छौँ । त्यसपछि भोलिपल्टबाट त्यही ढुुङ्गाबाट डराएर माग्दै हिँड्छौ । त्यस्तै हो यो संविधान, कानुन र विधि विधान भन्ने पनि । यो हामीले नै बनाएका हौँ । नत्र मेची– महाकालीदेखिका मानिस नेकपा, काँग्रेसमा कसरी आइपुगे ? यसको अर्थ त्यही विधि विधानले हामीलाई एकै ठउँमा ल्याएको हो नि । त्यसकारण पार्टी विधि विधानअनुसार चल्यो भने स्थायी पनि हुन्छ र सुहाउँदो पनि हुन्छ, हैन फेरि तपाईंले भनेजस्तै टार्ने, झार्ने, टाल्नेतिर मात्रै गइयो भने तीन वा ६ महिनामा फेरि ढल्छ । त्यसकारण हामी आफूले जेजे बनाएका छौँ त्यो आफूले बनाएको अनुशासनको सीमाभित्र बस्नुपर्छ भनिएको हो । आफूले बनाएको संविधान र विधानलाई मान्नु पर्यो । त्यसो गर्दा मात्रै हामी ठीक ठाउँमा हिँड्छाैँ ।
अब सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । त्यस क्रममा सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको पनि हेरफेर हुने चर्चा छ । कतिपय मानिसहरू दोहोरिएर मन्त्री भएका छन् तर तपाईं लामो समयदेखि निर्वाचित हुँदै आए पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको छैन । कतै तपाईं कुनै गुटको विश्वासिलो पात्र बन्न नसकेर त होइन ? अथवा अरू केही कारण छ ?
म दुईवटा कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे हो । म पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ, मापदण्ड बनाउँछ, मानिसहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु र यो पार्टीमा लामो समयदेखि रहेको छु । हो तपाईंले भनेजस्तै म यही पार्टीबाट ४, ५ चोटि माननीय भएको मान्छे तर मन्त्री भइनँ । म पहिला माननीयमा चुनाव लड्दा बेला २, ४ कक्षामा पढ्दै गरेका मानिस एकचोटि चुनाव जित्दैमा किन मन्त्री भएँ ? मन्त्री भएकाहरू केही महिनामै किन हटे ? यस्ता कुराहरूमा पार्टीले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अर्को कुरा म चरम गुटबन्दीमा विश्वास पनि गर्दिनँ । त्यसरी चरम गुटबन्दीमा नलागेपछि चाकडीमा पनि जानु परेन । त्यो पार्ट आफ्नै ठाउँमा छ । त्यो मेरो स्वाभिमानको कुरा पनि हो । त्यसले गर्दा अब पार्टीमा छलफल, निर्णय र मापदण्ड बनाएर निर्णय हुन्छ । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
आज सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै
एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय
बजेट पारित गर्ने तयारी
सुल्झियो बञ्चरेडाँडा विवाद